Ukufuna ukwazi ukusebenzisa iMacbook yakho esofeni | Ndisuka mac
Ukufuna ukwazi ukusebenzisa iMacbook yakho esofeni
Zininzi izihlandlo apho siphakamise inkxaso ukuze nawe these Yiba yikhompyuter yakho yedesktop kunye neelaptops zeApple zinamandla ngakumbi kuneekhompyuter zedesktop ezivela kwezinye iimveliso.
Ngesi sizathu, abantu abaninzi abanayo ikhompyuter ye-desktop ekhaya kwaye into abayenzayo kukusebenzisa iMacBook yabo njengeyunithi esembindini Baxhuma iMicrosoft Keyboard, iMouse yeMicrosoft kunye nomboniso wangaphandle.
Nangona kunjalo, ndingomnye wabo bahlala esofeni ekhaya kwaye ndibhala amanqaku endikucebisa ngawo yonke imihla, ke ndihlala ndinekhompyuter emathangeni am ukuba ndibhale. I-priori inokubonakala ingonwabanga kodwa ukuba ndikuxelela inyani, incinci kangakanani iMacBook eyi-intshi ezili-0 ubunzima bayo kunye nokusebenzisa indawo kuyo zombini kwibhodi yezitshixo nakwisikrini, ayindenzi ndingonwabi.
Kodwa ukuba ungomnye wabantu abaza kubulala ukuze babe nokuma ukuze bakwazi ukusebenzisa iMacbook ngendlela ebhetyebhetye xa useesofeni, ndiyifumene le ndawo isuswayo emnatheni. Yinkxaso evumayo, ngenkxaso esembindini, unelinye lamalungu alo phakathi kwemilenze kwaye ke ugcine ikhusi leLaptop lizinzile kwaye likwindawo entle.
Njengoko ubona kwimifanekiso esiyincamathisela, ungayisebenzisa nenxalenye esembindini ukuze ukwazi ukuyifumana phakathi kwemilenze, gcina elo candelo likumbindi kwaye ujoyine amanye amacandelo amabini enkxaso ukuyisebenzisa etafileni okanye Olunye uhlengahlengiso olwenziweyo kuthathelwa ingqalelo ukutyekela okufanayo (Lapdesk | Lapdesk flat angle | Laptop Stand | Travel / Storage). Ixabiso layo malunga ne-euro ezingama-31 kwaye ungayifumana kule dilesi ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » these » Ukufuna ukwazi ukusebenzisa iMacbook yakho esofeni
I-Apple CarPlay ifumene ukwaneliseka komsebenzisi ngama-85%
ITropico 4: Umdlalo woHlelo lweGolide kwintengiso yexesha elincinci